Gbasara Anyị - Hebei Med Site Medicines Co., Ltd.
Ndị enyị anọ guzobere ọgwụ Hebei Med Site Co., Ltd. na 2005 n'ihi nrụzigharị nke ụlọ ọrụ ochie. Ezigbo akụ nke azụmaahịa na ndị otu ọkachamara bụ uru anyị siri ike. N’oge na-adịghị anya, anyị edenyela aha ụfọdụ ọgwụ na ngwa ụlọ ọgwụ ndị a na-ebugharị ebugharị na ọtụtụ mba ma nwee ezigbo ire ere. Nke a na - eme ka anyị nwekwuo ike ịmepe karịa ahịa na ịnwale saịtị azụmahịa ọhụrụ.
Ugbu a, anyị nwere ezigbo ndị otu maka ngwaahịa iku ume (oxygen concentrator, nebulizer ultrasonic, sputum suction, suction ngwa), ọgwụ mgbochi decubitus ikuku matriki, akpa mmiri na akpa mmamịrị, ngwaahịa nlekọta ụlọ (infrared theometer, infrared thermometer iwaju, elektrọn ọbara mgbali ileba anya) , sphygommanometer, temometa, stethoscope, pulse oximeter), mkpofu ọgwụ ndị ọzọ & nchedo (nkpuchi ihu, uwe aka, akwa mkpuchi, mkpuchi akpụkpọ ụkwụ, uwe elu, drape, paịlị, aka uwe, ndị na-ahụ maka ọpụpụ, wdg) na akụrụngwa ọgwụgwọ ezumike (akwa ụlọ ọgwụ, olu nkwado, oche oche, oche, osisi, wdg).
Dunaliella salina bụ ngwaahịa ọla edo maka ahụike mmadụ n'oge a, dịka ihe mejupụtara ya kwekọrọ na nha nke ihe dị na nsị anụ ahụ na plasma sel, ma nwee ike zụọ mkpụrụ ndụ ma dozie nsogbu nke mmebi sel. Ọnụ ọgụgụ mmadụ na-arịwanye elu na ụwa niile na-eji ya ma na-emeso ya dị ka ngwaahịa nchebe mbụ.
Nnukwu onye mmekọ anyị - Mongolia Lantai Industrial co., Ltd bụ ama maka ọgaranya ya na ụwa dị ọcha na ụwa. Site na iji teknụzụ dị elu nke mmepụta, ngwaahịa salina anyị Dunaliella na-adọta ọtụtụ ndị na-azụ ihe.
2019-nCoV na-emetụta ndụ anyị kemgbe Jenụwarị 2020, eji ejiji mkpuchi ụlọ ọrụ anyị na Wuhan ma rụọ ọrụ dị mkpa ebe ahụ. Ugbu a, a na-ebunye ngwa ngwa ndị nwere nnwale, igwe mkpuchi ahụike, masks ịwa ahụ, iko nchebe, uwe mkpuchi, uwe aka ...... na-ebufe mba ndị ọzọ ngwa ngwa site na ngwa ngwa anyị.
“Ogo nke mbụ, ọrụ izizi, ịrụ ọrụ nke ọma, Ndụ obi ụtọ” bụ ihe anyị na-achụ.
Họrọ ebe a, mejuo ebea .....